Siyaasi Maxamuud Xaashi muxuu ka yidhi doorshada xasan sheekh | Biyoguurenews.com
Home Wararka Siyaasi Maxamuud Xaashi muxuu ka yidhi doorshada xasan sheekh
Xasan sheekhoow, wixii shalay ku seegay, yaanay maanta ku seegin.
Waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin balaadhan uga dirayaa, madaxweynaha cusub ee loo doortay dawlada Somaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Sidaa darteed, waxaan ku leeyahay Xasanoow, alle kaga baq amaanada iyo xilka culus ee aad ummadaada u qaaday. Madaxnimada iyo mansabka weyn ee aad maanta ku guulaysatay mar labaad, ma’aha badhaadhe iyo barwaaqo aad ku bariisatay, ama kuu soo biirtay. Balse, waa bilowga xil balaadhan oo leh xisaab iyo xanuun badan, ee waar hooy midhkaa xiska ku hay.
Dhinaca kale, madaxweynaha la doortay, waxaan uga digayaa in uu cagta dhabada saaro, dariiqii uu ku dayoobay, duqii isaga talada dalkiisa uga horeeyay, (Waa Farmaajo eh). Kaas oo salka ku hayey dulmi, dir-sooc, deris nacayb, dad isku wad la’aan , damac waalan iyo digteyrtarnimo.
Kaas oo caado ka dhigtay qiyaano, qiiq isku qarin, iyo qodxo la aaso. Madaxweyne Farmaajo, magan alle’e ma lahayn habayaraatee, siyaasad quman iyo aragti qoto dheer, taas oo ku aadan qadiyada wada hadalada labada dal. Balse, wuxuu qorshihiisu ahaa mid aan ka badnayn, qarow iyo qiiro aan qolqolkiisa iyo qindigiisa dhaafsiisnayn.
Previous articleXasan Sheekh oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha
Next articleWax Aargoosiyi Ma Jiri Donaan Wax Laysu Raacaya”Madaxweyne Xasan Shiikh